Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Iindaba zocingo » Imiqondiso emi-6 Umtshato Wakho Unokuba Sengxakini
Iinkundla kwilizwe lonke ziya kuqala unyaka omtsha ngokunyuka kwamaxwebhu oqhawulo-mtshato aqala ngoJanuwari kwaye anyuke ngoFebruwari ukuya kuMatshi. Ngenxa yokuba uJanuwari ilixesha lokwenza izigqibo kunye nokucwangcisela unyaka omtsha, izibini ezininzi zinokuthatha eli xesha lonyaka ukuze ziphinde zihlole ubudlelwane bazo. Ukuba iinzame zokucebisa, ukunxibelelana, kunye nokulalanisa, azisebenzi - izibini zinokukholelwa ukuba uqhawulo-mtshato kuphela kwendlela.
Ngokuka-Kris Balekian Hayes, iqabane elilawulayo e-Balekian Hayes, PLLC, le miqondiso ilandelayo isenokuthetha ukuba uqhawulo-mtshato lolona khetho lungcono.
Kuya kubakho amaxesha anzima ebomini, kodwa izibini ezitshatileyo owomeleleyo zidla ngokukwazi ukumelana nesaqhwithi kunye yaye azikwazi kuyithelekelela imini ngaphandle kweqabane lazo. Masithi ixesha elinzima liyadlula kwaye ufumanisa ukuba awonwabanga. Xa kunjalo, kubalulekile ukuqwalasela le mibuzo ilandelayo ukuze ubone enoba umtshato awungunobangela wokungonwabi kusini na.
• Luba njani ulonwabo lomtshato wam kwisikali ukusuka kwesinye ukuya kwishumi?
• Ngaba unokutshintshwa umtshato wam?
• Ngaba ndiyasibona siphinda sonwabe?
Unxibelelwano lungundoqo kumtshato owonwabileyo nosempilweni. Ukungabikho konxibelelwano kubudlelwane luphawu olucacileyo lokuba uqhawulo-mtshato lusemnyango, ngakumbi ukuba iqabane lakho alithethi nawe kodwa lithetha nabanye kuqala.
Nihlala kunye kuphela abantwana.
Kungabonakala kulula ukuhlala kunye kubantwana, kodwa kunokuba nefuthe elibi elihlala lihleli kubomi babo kunye nobudlelwane bexesha elizayo.
Uziva ulungele ukuqhubela phambili komnye umntu.
Uninzi lwabantu alukwazi ukuqonda ingcinga yomntu omtsha, kodwa ukuba sele ubeke izinto zakho kwicala elitsha, mhlawumbi wawusenziwa kwakudala.
Uhlala kuphela ngenxa yokuba usoyika utshintsho ngokubanzi okanye ukwesaba utshintsho olukhulu kwindlela yokuphila.
Amaxesha amaninzi, abantu bahlala ngenxa yokuba abanayo imali yokuhamba kwaye boyika into engaziwayo. Ukuba isizathu sakho sokuhlala asisabandakanyeki kwiqabane lakho, umtshato wakho kusenokwenzeka ukuba uphelile.
Uzamile ixesha kude, kwaye bekungekho xesha laneleyo.
Ukuba uchitha ixesha kude neqabane lakho kwaye kukushiya ulangazelela ixesha elingakumbi, ukungatshati inokuba yinto oyifunayo.
Kusenokungabikho ixesha elifanelekileyo lokuqhawula umtshato, kodwa impendulo idla ngokuba nguJanuwari kwabanye abantu abagqibe ekubeni baqhawule umtshato ekwindla okanye ngexesha leholide. Emva kokuba uxinzelelo lweeholide luphelile kwaye abantwana babuyele kwishedyuli yabo yesiqhelo, izibini ziya kuba nexesha elingakumbi, indawo kunye nemfihlo ukuqala inkqubo yokuqhawula umtshato.
Abalindi ngenqwelomoya bamangalela iiNqwelomoya zeAlaska kunye neManyano...
Amaqabane eCanada Jetlines kunye ne-Unisync kwinqwelomoya entsha...
Intengiso yeMarike yokuTyiswa kwezinambuzane ukuze ikhule kwi-CAGR eRobust ye...
Ukuhamba noBaby: Yonwabele
Amanzi aBlue ukuba aqhube iHalesford Harbour Resort &...
I-Indiya iZazisa uMgaqo-nkqubo oMtsha woKhenketho weSizwe
Abasebenzi baphulukana nomhlaba njengoko imivuzo isilela ukuhambisana...
Isisombululo esitsha kwiMpilo yoLwazi kunye nokusebenza kwengqondo
UHambo lwe-Uniglobe Lonyula uMboneleli oMtsha oKhetwayo